माओवादी केन्द्र म्याग्दीद्वारा उम्मेदवारको नाम सिफारिस | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार माओवादी केन्द्र म्याग्दीद्वारा उम्मेदवारको नाम सिफारिस
माओवादी केन्द्र म्याग्दीद्वारा उम्मेदवारको नाम सिफारिस
२०७४, ११ आश्विन बुधबार २२:०९
माओवादी केन्द्र म्याग्दीले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । बुधबार सम्पन्न जिल्ला कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरू टुंगो लगाएर केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो । माओवादीले प्रतिनिधि सभाका लागि गोविन्द पौडेल, जिल्ला सदस्य खुमनाथ सुबेदी र चन्द्र बहादुर घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ । गोविन्द पौडेल पहिलो संविधानसभाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका लागि १ र प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा माओवादीले प्रदेशसभाका लागि पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार टुंगो लगाएर केन्द्रमा सिफारिस गरेको अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य सुदिन पौडेलले बेनीअनलाइनलाई बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र नं. १ मा प्रत्यक्ष तफसुवास विश्वकर्मा, हरि भण्डारी, समानुपातिक तर्फ इन्द्र बहादुर मगर, लाल कुमारी पुन र हेमा छन्त्याल रहेका छन् ।
इन्द्र बहादुर पुन मंगलबार नयाँ शक्ती म्याग्दी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ मा प्रत्यक्ष तर्फ पुनम खड्का, राजेन्द्र शेरचन र याम रोका र समानुपातिक तर्फ टेक बहादुर विक सुवास, होमलाल पुनको उम्मेदवारी टुंगो लगाएर केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ । पुनम खड्का प्रचण्डको सरकारमा सचिवालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा विकास निर्माण र बजेटमा काम गरेका थिए । खड्का सहिद परिवारका सदस्य समेत हुन् । उनले जनयूद्धमा बहिनीर पिता तत्कालिन समयमा राज्य पक्षबाट मारिएका थिए ।
पार्टी कार्यालयमा दिनभर चलेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य एवम् प्रभावशाली नेता अमित शेरचन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला इन्र्चाज मान बहादुर बुढा लगाएतको उपस्थितिमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएपछि बिहिबार देखी चुनावी योजना सहितको अभियान सुरु गर्ने समेत शेरचनले निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रबाट उम्मेदवार टुंगो लागेपछि मात्रै निर्वाचनको अभियानमा जाने पुरानो संस्कारलाई तोड्ने प्रतिबद्धता समेत माओवादी केन्द्रले गरेको छ । बैठकमा प्रतिनिधि र प्रदेशसदस्यमा अत्याधिक मतले विजय हुने गरी निर्वाचनमा रणनीति तय गरी जनताको घर–घरमा पुग्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । बैठकले प्रतिनिधि सभाको परिचालन समितिको संयोजकमा मान बहादुर बुढा, क्षेत्र नम्बर १ को संयोजकमा विनोद केसी र क्षेत्र नम्बर २ मा देवराज सुबेदीलाई जिम्मेबारी तोकेको छ । आगामी मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा म्याग्दीमा उम्मेदवार टुंगो लगाउनेमा माओवादी पहिलो भएको छ ।
Previous articleयस्ता छन् एमाले म्याग्दीको २८औं पूर्ण वैठकका निर्णय
Next articleयस्ता छन् कांग्रेसमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा उम्मेदबारका आकांक्षी